Akụkọ - Ojiji na akpachara anya nke DEET
Agrochemical / Pharmaceutical Intermediates
Usoro Methyl Benzoic Acid
Usoro Methylbenzoyl Chloride
Nitrobenzoic acid usoro
Chemicals dị ize ndụ na ihe mgbapụta
Carbonate nke potassium
Ụlọ ọrụ nke oge a
Ojiji na akpachara anya nke DEET
A na-akpọkwa DEET dị ka N, n-diethyl-m-toluidamide. Ebu ụzọ chepụta DEET n'oge Agha Ụwa nke Abụọ ma Ngalaba Ugbo US wepụtara ya. Ndị agha US tinyere ya n'ọrụ na 1946 wee debanye aha ya maka iji ọha eme ihe na United States na 1957. E rere ya n'ahịa ka ọ bụrụ ọgwụ mgbochi anwụnta nke onwe ya kemgbe 1965.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 70 nke nyocha egosila na DEET nwere mmetụta na -asọ oyi na anwụnta dị iche iche (anwụnta, ijiji, fleas, Chigger Mites, midges, wdg) na ọ nwere ike gbochie ọtịta anwụnta. Agbanyeghị, ọ naghị adị irè maka aesụ, Solenopsis invicta, spiders na ihe nchebe onwe onye ndị ọzọ ịta, n'ihi na ha dị iche na arthropods na-a bloodụ ọbara, ha chọkwara ịkwụsị omume a dị oke egwu ọ gwụla ma ha na-eji ọgwụ ahụhụ ma ọ bụ anwụnta anwụnta eletrik na ụzọ ndị ọzọ.
Usoro nke Ime Ihe
Usoro nke DEET edobeghị anya. E buru ụzọ chee na ọ nwere ike igbochi ụmụ ahụhụ na -a bloodụ ọbara ịbịaru mmadụ nso site n'ịkpọ isi na -egbochi ya.
Agbanyeghị, DEET nwere ike igbochi nzaghachi electrophysiological nke anwụnta na lactic acid na ogige 1-octen-3-ol, kpuchie ma ọ bụ gbochie sistemụ anwụnta na-esi ísì ụtọ, ma gbochie nnabata nke anụ oriri kwesịrị ekwesị.
Ka oge na-aga, achọpụtara na DEET na-arụ ọrụ na neurons anwụnta pụrụ iche ma na-emepụta mmetụta na-asọ oyi, mana anaghị egbochi echiche nke lactic acid, CO2 na 1-octen-3-ol.
Nnyocha ọhụrụ ahụ chọpụtakwara na nchikota nke DEET na ụfọdụ ebumnuche molekụla bụ mmeghachi omume biochemical mbụ iji chọpụta ihe ndị dị na mpụga, mana ọ dị mkpa ka enyocha ya ka emechaa.
Ojiji na ịkpachara anya
N'ozuzu, DEET nwere nchekwa dị elu yana obere nsí. Ọmụmụ ihe dị ugbu a na -atụ aro na DEET enweghị mmetụta carcinogenic, teratogenic na mmetụta mmepe. Ụlọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa (CDC) na -atụ aro na ụmụ nwanyị dị ime na ndị na -enye nwa ara na -eji DEET (otu ndị okenye na -adịghị ime ime) iji zere ọtịta anwụnta ma belata ohere nke ọrịa na -efe efe. N'otu oge ahụ, American Academy of Pediatrics (AAP) na -atụ aro ka ụmụ ọhụrụ karịrị ọnwa abụọ jiri 10% - 30% DEET, nke dị mma ma dịkwa irè, na ekwesighi iji ya ihe karịrị otu ugboro n'ụbọchị. Ọ naghị adabara ụmụaka na -erubeghị ọnwa abụọ
Ọdịnaya nke DEET n'ahịa sitere na 5% ruo 99%, achọpụtara na mmetụta nchụpụ nke 10% ruo 30% DEET yiri. Agbanyeghị, oge dị irè nke DEET na mkpokọta dị iche iche dị iche. 10% nwere ike inye ihe dị ka awa 2 nke oge nchekwa, ebe 24% nwere ike inye ihe ruru awa 5 nke oge nchekwa. Na mgbakwunye, igwu mmiri, ịsụ mmiri, ihicha ihe na mmiri ozuzo nwere ike belata oge nchedo DEET. N'okwu a, enwere ike họrọ DEET nwere oke ịta.
Ekwesịrị ịmara na ihe karịrị 30% DEET enweghị ike ịbawanye oge nchedo, mana ọ nwere ike ịpụta mgbapụta akpụkpọ ahụ, ọnya na akara mkpasu iwe akpụkpọ anụ ọzọ, yana nwekwara ike nwee neurotoxicity.
Oge oge: 01-06-21
24 awa Online
Adreesị: Nke 608, ngọngọ A, World Trade Center, Gusu District, Suzhou City, Jiangsu Province
Copyright - 2020-2021: Ikike niile echekwabara. Ngwaahịa na -ekpo ọkụ - Map saịtị - AMP Mobile
2-Methyl-4-Nitrobenzoic Acid, N, N-Diethyl-3-Methylbenzamide, Potassium sulfate, 2-Methyl-3-Nitrobenzoic Acid, 2-Methylbenzoic Acid, O-Toluoyl chloride,
nke bụ whatsApp